Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Somaliya oo goor dhow toogtay nin askari ahaa – idalenews.com
Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Somaliya oo goor dhow toogtay nin askari ahaa
Muqdisho(INO)- Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa waxay goor dhow toogasho ku dileen nin askari ahaa, balse xirnaa dharka shibilka, iyadoona ay ka shakiyeen.
Goobjooge, ayaa Idale News Online u sheegay in Ciidanka Ilaalada Villa Somalia ay u xirneyd wadada aadda dhinaca Ex Fiyooraha, halkaana ay ku dileen askarigaasi.
Goobjoogaha oo ka tirsan dadka deegaanka, ayaa yiri “Ciidamada Madaxtooyada ka hawlgala oo wadada ay u xiran tahay, ayaa waxaa soo maray askari watay gaari Kaarib ahaa, dharka shibilkana xiran. Ciidamadii way joojiyeen waxayna ku amrayn inuusan mari karin wadada dhinaca Ex Fiyooriyaha, sababo amniga la xiriira, askarigiina dhegaha ayuu ka fureystay.”
“Illaa saddex jeer ayaa looga digay inuusan mari karin wadadaasi, wuxuuna lahaa ima celin kartaan anigaba askari ayaan ahay. Sidaas ayayna u toogteen Ciidamadii Ilaalada Madaxtooyada. Sababta ay u dileen waa amar diido iyo shaki ay ka muujiyeen diidmada uu sameeyay.”
“Ninkaan inuu askari ahaa markii hore lama ogayn oo dib ayaa laga ogaaday, maxaa yeelay dharka shacabka ayuu xirnaa, nin kasta oo dareyska rayidka watana mala kala cadayn karo wuxuu yahay.”
“Ciidan kale ayaa yimid meeshii lagu dilay askarigaasi, meydkiisii ayayna ka qaadeen. Hadda waxaan aragnaa in Saraakiisha Ciidamada Dowladda ay ka wada hadlayaan dilka askariga.”
Tani waxay ku soo aadeysaa, xilli ay xaalad feejignaan ah ku jiraan Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada, ka dib weerarkii uu dhiigga badani ku daatay, ee shalay Shabaabku ku qaadeen Hotelka SYL, oo 500 oo tallaabo uun u jira Villa Somalia.
Ururka Al Shabaab, ayaa Talaadadii ku cago jugleeyay inay kordhin doonaan weerarada ay ka gaysanayaan Magaalada Muqdisho, si ay u fashiliyaan doorashooyinka lagu wado in billaha ka qabsoomaan dalka.
Beesha Yantaar Oo Dowladda Soomaaliyeed Ugu Baaqday Inay Tixgeliso Rabitaankooda.
Daawo: Madaxweyne Xasan oo ka qaybgalay Salaadda Janaasada askartii lagu dilay qaraxii shalay